हिमाल खबरपत्रिका | गुमेको पुस्ता, उडेका सपना
द्वन्दका कारण विदेशिएको सिंगो पुस्ता हामीले नपाउने त पक्का छ, तर अबको पुस्ता खेर जान नदिन, युवा आवश्कतामाथि राष्ट्रिय बहस अनिवार्य छ ।
उडायो सपना सबै हुरीले... यो गीतले हुरीले उडाएको प्रेमको सपनाको कुरा गरे पनि यो चरितार्थ भएको छ, विदेशिएका अधिकांश युवाका उडाइएका जीवनका सपनाहरूमा। उच्च शिक्षाको महत्वाकांक्षा राखेर विदेशिएका वाग्लुङका दिपेश आचार्य (परिवर्तित नाम) स्वीट्जरल्याण्डको जेनेभामा छन्। उनको दिन– बिहान ८ बजेदेखि राती १ बजेसम्म रेस्टुराँमा काम गरेर बित्छ। दिपेश त्यहाँका नेपाली विद्यार्थीमध्ये राम्रै प्रगति गर्नेमा गनिए पनि उनको पछुतो बुझने कमै छन्।
२०५७ को एसएलसीमा ८२ प्रतिशत ल्याएका दिपेशले १२ कक्षा पनि 'डिस्टिङ्सन' ल्याए, तर मेडिसिनको छात्रवृत्ति प्रतिस्पर्धामा सफल हुन सकेनन्। घरबाट लगानी गरेर पढाउन सक्ने अवस्था थिएन। साथीभाइबीच विदेश गएर आफैं कमाउँदै पढ्न सकिने चर्चा हुन्थ्यो। कन्सल्टेन्सीका काउन्सिलरहरूले काम पनि पाइने, दाम पनि कमाइने र पढाइ पनि हुने सपना देखाइदिए। तर, यथार्थ त्यस्तो रहेनछ। काम गरेर अध्ययनलाई सँगै लैजान सम्भव थिएन, आउँदाको ऋण तिर्नु थियो, पढ्ने शुल्क जम्मा गर्नु थियो अनि बाँच्नु पनि। उनी सामान्य इन्ष्टिच्यूटमा भर्ना भएर कमाउने काममा मात्र लागे। पढ्ने सपना अधुरै रह्यो।
यस्तो व्यथा सुनाउने दिपेश एक्ला होइनन्। बुटबलको एभरेष्ट बोर्डिङ स्कूलबाट ८१ प्रतिशत ल्याई एसएलसीमा स्कूल टप गरेका गुल्मीका शोभित ढकाल (परिवर्तित नाम) काठमाडौंमा छात्रवृत्तिमा उमावि अध्ययन पूरा गरेपछि कन्सल्टेन्सीमार्फत पूर्वी युरोपको लात्भिया पुगे, इन्जिनियरिङ पढ्न। त्यहाँ पुग्दा न कन्सल्टेन्सीले भने जस्तो काम पाए, न पढ्ने वातावरण। बेरोजगारीको मार, घरको ऋण र कन्सल्टेन्सीको बेइमानीले उनको सपना मात्र उडेन, प्रतिभा पनि मर्‍यो। 'भिजिट भिसा' मा लण्डन पुगेका उनी अहिले व्यक्तिगत जीवनमा समेत कठिन यात्राबाट गुज्रँदै एक भारतीय रेस्टुराँमा काम गरेर होटल म्यानेजमेन्टमा डिप्लोमा गर्दैछन्।
जेनेभामा चितवनका शोभाकर गौतमको जन्मदिनमा सहभागी पारस नाम बताउने एक नेपाली युवकको अवस्था दर्दनाक देखियो। आमा र बुबा दुवै प्राध्यापन पेशामा रहेका एक शिक्षित परिवारको सन्तान उनी पढ्नका लागि माल्टा पुगे। तर, काम नपाउँदा पढाइलाई निरन्तरता दिन सकेनन् र स्वीट्जरल्याण्डको जुरिच नजिक शरणार्थी क्याम्पमा बेवारिसे जीवन बिताइरहेका छन्। उनको दिनचर्या बिउँझेदेखि ननिदाएसम्म मदिरामा डुबेर बित्छ। नेपालको बेरोजगारी छल्न जर्मनी पुगेका क्षितिज भट्टराई (परिवर्तित नाम)ले पढ्न सकेनन्। अहिले साथीहरूसँग मिलेर उनी सरसफाइको काम गर्दै बचाएको पैसा जम्मा गरी क्लिनिङ एजेन्सी खोलेका छन्। करीब २० हजार युरो तिरेर उनले त्यहाँको 'ग्रीन कार्ड'का लागि नक्कली विवाह पनि गरेका छन्।
जनवादी शिक्षाका लागि बुर्जुवा शिक्षा बहिष्कारका नाममा पढाइबाट वञ्चित गरी सशस्त्र संघर्षमा होमिएका कार्यकर्ता हुन् वा त्रासले बाहिरिएका युवाहरू, उनीहरूको बिचल्ली र गुमेको रचनात्मक भविष्यको मूल्य माओवादी नेतृत्वले कहिले बुझला? अभिभावकहरू आफ्नो सन्तानको भविष्यप्रति अझ् गम्भीर हुँदै छोराछोरीको विदेश जाने लहैलहैबाट कहिले मुक्त होलान्? च्याउझै उम्रेका कन्सल्टेन्सीहरू अर्काका सपना बेचेर गरिने लूटको खेतीबाट माथि उठेर जिम्मेवार बन्ने समय कहिले आउला? राजनीतिक नेतृत्व र सरकार जनशक्ति व्यवस्थापन र रोजगारप्रति कहिले गम्भीर बन्लान्? यी सबै अपेक्षा हुन्। गुमाएको यो पुस्ता हामीले नपाउने पक्का छ तर विषय अर्को पुस्ता गुमाउने वा बचाउने भन्ने मात्र हो। अबको पुस्ता नगुमाउन यस विषयले गम्भीरताका साथ राष्ट्रिय बहसमा स्थान पाउन जरूरी छ।